hosty: Qoraalka si looga saaro xayeysiiska biraawsar kasta | Laga soo bilaabo Linux
xiddigiska | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Tan iyo markii aan isku dayay barnaamijka 'AdAway app' ee loogu talagalay Android waxaan raadiyay isla wax u ah Linux, laakiin ma aanan helin, haddii ay jiraan xalal isku mid ah sida halkaan hore loogu daabacay Qor si aad uga saarto xayeysiinta biraawsar kasta, laakiin dhab ahaan maahan waxa aan raadinayo. Waa maxay farqiga u dhexeeya? AdAway waxay qaadataa xarfo badan, way isku darsamaysaa, waxay ka saareysaa sadarro nuqul ah, waxayna nadiifineysaa feylka.
Iyo sidoo kale qoraallada ay heshay ma aysan isticmaalin faylkaagii martida ahaa ee asalka ahaa, taasi waa, qaabeynta faylkaaga martida loo ahaa kuma jirin faylka martida la soo saaray. Marka raadinta waxaan helay qoraal si aad ah ugu dhawaaday, waan tafatiray oo badalay si aan ugu dambeyntii u gaaro wixii aan doonayay, natiijada tan ayaa ah martigelin, markaa wac.
Faa'iidooyinka AdBlock iyo kordhinta biraawsarka kale? Marka lagu daro xaqiiqda ah in tani ay ka shaqeyneyso dhammaan nidaamka qalliinka hal mar, waxay ka hortageysaa isticmaalka ilaha noocyada kordhinta.
Wuxuu ubaahan yahay cURL iyo Wget
Waxaan ku rakibnaa shuruudaha:
Ubuntu / Mint / Debian:
Arch / Manjaro / Antergos:
Ku rakib hoyga:
Haatan waan socodsiineynaa (Xusuusnow inaad socodsiiso ugu yaraan 1 jeer asbuucii ama bishiiba si faylashaada martida loo cusbooneysiiyo iyo in laga xannibo goobaha xayeysiinta cusub):
Soo celi faylka martigeliyaha asalka ah
Ka tirtir qoraalka
Talo: Haddii aad rabto inaad wax ka beddesho feylasha martida, waxaan kugula talinayaa inaad wax ka beddesho feylka /etc/hosts.original ka dibna aad martigeliso, habkan martigelintu wuxuu ku abuuri doonaa faylka martida martigelinta goobahaaga shakhsi ahaaneed (Samee tan haddaad horay u martigelisay, maahan kahor.).
Dhammaan koodhka qoraalka ee laga heli karo my GitHub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » hosty: Qoraalka si looga saaro xayeysiiska biraawsar kasta
Ha ilaawin inaad ku darto Cron, sidoo kale. Waxaan u sameeyay inaan taas u sameeyo.
Kaliya waan tijaabiyey, oo si fiican ayey u shaqeysaa. Xitaa waxaan u tegi lahaa illaa iyo intaan dhihi lahaa inay ka shaqeyso si ka wanaagsan habka loo isticmaalo daemons sida Squid ama Privoxy.
Waa la mahadiyey!
Sideen ugu biiriyaa liiskeyga xayeysiiska xayiran? Waxaan xoogaa ugu shubi doonaa github-kayga aan hadda tijaabiyey wayna shaqeeyaan.
Riwaayaddu sidoo kale waa in booska (qaybta) loo daayey meel bannaan oo leh digniin ah "in aan la xidhi karin." Caawinta waa la mahadiyey 😀
Waan helay arinta, horeyba waa loogu daray, socodsiin marti gal ah si loo casriyeeyo martida. Waxaa si toos ah looga qaadaa keydkaaga.
Qaab Cajiib ah. Fudud oo fudud. Mahadsanid.
Waad ku mahadsantahay soo galinta. Shaqayso
Aad baad ugu mahadsantahay shaqadaada, waan isku dayi doonaa.
Ku jawaab ThecaTTony
Qoraal wanaagsan! Waxaan u maleynayaa inaad si qalad ah u qortey amar haddii aanan qaldamin:
sudo cp /etc/hosts.original / iwm / martida loo yahay
Miyaanay ahayn inay jidka kale ku wareegto?
sudo cp /etc/hosts /etc/hosts.original
Maya, sifiican ayaa loo qoray waa in la soo celiyo faylkii asalka ahaa. Tallaabooyinka kaliya ee loo baahan yahay waa in la rakibo oo la ordo, kuwa kale waa in ay dib ugu noqdaan martigeliyihii hore iyo in barnaamijka laga tirtiro.
Haa, waa aniga oo aanan arkin koodhka qoraalkaaga. Hadda waxaan fahamsanahay in qoraalku uu samaynayo nuqul kii asalka ahaa ee la odhan jiray "hosts.original" waana ku sifeeyey. Waxaan u maleeyay inay ahayd in la sameeyo nuqul ka hor inta aan la socodsiin qoraalka. Farxad!
Aad u fiican, runtii waan jeclahay.
Soo jeedinta kaliya ee aan arko waa barta "Parsing, nadiifinta, nuqul ka sameynta, kala soocida ..." in lagu daro meesha "liiska cad" ama ka reeban
Ku jawaab soymicmic
Diyaar, hada laga bilaabo waxaad ku dari kartaa waxyaabo ka reeban /etc/hosts.whitelist midkiiba safkiiba. Waxay noqon kartaa cinwaanka kaligiis ama 0.0.0.0 ama 127.0.0.1 bilowga.
Waxay si fiican u shaqeysaa ugu yaraan hadda !!!
Aad baad u mahadsantahay 🙂
Weyn Kaliya wixii aan u baahday. Kontact-ka suurtagal ma ahayn in la furo biraawsarka iyada oo aan la helin xargaha xayeysiiska ka laalaada maqaalka si loo akhriyo
Ku jawaab Bert
Waad ku mahadsantahay dhajinta qoraalka.
Si fudud ayaa loo xisaabtami karaa, loo tifaftiri karaa waxayna iga badbaadineysaa inaan cusbooneysiiyo liistadeyda / iwm / martigeliye mar kasta oo badanaa.
Aad u fiican. Waad ku mahadsantahay wadaagista. Salaanta reer Argentina.
Hal su’aal, qaabkani ma lagu ogaan karaa websaydhada ka hortagga-adblock ee ku soo qulqula webka?
Haddii la ogaan karo, illaa iyo hadda hal bog oo internetka ah ayaan dhibaatadan ku qabay.
Ku hagaaji adoo ku daraya webka liiska liiska.
Waad ku mahadsantahay jawaabta iyo qalabka.
Ku jawaab xpt
Sidee wanaagsan qoraalkaani!
Talo ahaan waxaan kuu sheegi lahaa inaad hagaajiso hirgelinta iyo balaadhinta qoraalka ayaa ah in tilmaamaha, adeegso git clone / git jiid si aan dhammaanteen uga wada faa'iideysanno cusbooneysiinta!
Aad baad u mahadsantahay oo sii wad !!!
Uma isticmaalo git tan laakiin qoraalka marwalba wuxuu si toos ah u cusbooneysiiyaa laga bilaabo maalinta 0. Khadkan fudud marwalba waa la cusbooneysiiyaa.
Goorma ayaad dib u soo celin doontaa feylasha martida ee asalka ah? Ama maahan inaan dib u soo celiyo maxaa yeelay ma aanan sameyn talaabadaas, sida aan ugu daro qolka, iyo sidoo kale sida aan wax uga beddeli lahaa martigaliyayaasha asalka ah, sida ay u socoto
Ku jawaab moa
Dhab ahaan, soo celinta martida asalka ah sida iska cad looma baahna in la sameeyo.
Marka laga hadlayo cron, kuma isticmaalo cinwaanka, Google hubaal waxay leedahay casharro aad u wanaagsan, waxay ku jirtaa qorshahayga inaan ku ballaariyo martigalinta, isdhexgalka garaafka, cron, iwm laakiin mustaqbalka.
Si wax looga beddelo martigeliyaha. Asal ahaan:
Terminal-ka: $ sudo FAVORITE-TEXT-EDITOR /etc/hosts.original
Waxaan isku dayay inaan hagaajiyo qoraalkaaga oo waxaan uga tagay sidan: https://github.com/cyttorak/hosty/blob/master/hosty.sh
Tani waa marki iigu horaysay ee aan ku shubo github markaa fadlan ila soo socodsii haddii ay ahayd inaan u badalo qoraalka si aan u ixtiraamo qoraagaaga ama aan ugu daro aqoonsi ama sidan oo kale.
Ku jawaab cyttorak
Waxaan kuu sharxi doonaa sida caadiga ah ee looga socdo Github markaad rabto inaad wax ku biiriso mashruuc 🙂
1) Fargeeto - Waa la qabtay
2) Wax ka beddel waxa aad rabto, adoo ilaalinaya waafaqsanaanta mashruuca asalka ah - Badh, waxaad wax ka beddeshay waxyaabo aan u dhigmin asalka martida loo yahay, waxaan u maleynayaa inaad fahantay waxa aan ula jeedo, oo fadlan ku xafid dhammaan qoraalada Ingiriisiga.
3) Samee codsi jiido mashruuca asalka ah, si tan loo sameeyo waa inaad tagtaa keydkaaga, tag Codsiyada Soo Jiidashada https://i.imgur.com/Y1PMKST.png ka dib codsi New jiid http://i.imgur.com/ljhaIdH.png oo sharax dhammaan isbedelada la sameeyay
4) Kadibna waan aqbalayaa jiidashada iyo voila, hoyga asalka ah waxaa lagu cusboonaysiiyay magacaaga isticmaale ahaan qoraa ahaan.
Aad baad ugu mahadsantahay xiisahaaga, haddii aad rabto inaad si deg deg ah ila soo xiriirto barteyda waxaad leedahay shabakadaha bulshada http://juankblog.tk/ doorbidayaa Twitter, ama G + haddii aadan mid haysan. Farxad!
Waxaan horey u bedelay farriinta aan ku hayo Isbaanishka.
Qiyaastii qodobka 2 ee iswaafajinta, ma garanayo waxaad u jeeddo, ma waxaa ugu wacan adeegsiga awk?
Malaha maalinta oo dhan ayaan maqnaan doonaa, markaa berri waan soo jiidan doonaa
Aad baad u mahadsantahay. Nabad gelyo
Waxaan ula jeedaa isbeddelada README.md, hosty iyo install.sh, iyagu ma taageerayaan mashruuca. Ku laabo faylalka asalka ah.
Waa la dhammeeyay https://github.com/juankfree/hosty/pull/3
Diyaar garow, la jaan qaado akhriska iyo baakadka aur koodhkan cusub isla markaana ka dhigay kuwo la akhriyi karo.
Salaan iyo mahadsanid wada shaqeyntaada mashruuca, softiweer bilaash ah ha noolaado! : D.
Hal su'aal, maxay u yihiin xayndaabyada khadka 42 ee https://github.com/juankfree/hosty/blob/master/hosty.sh harraad? Taasi macnaheedu maahan in liiska la caddeeyo iyada oo aan loo eegin waxa isticmaalahu sameeyo?
Hosty waa xayeysiis xayeysiis ah, waxaan u maleynayay sidaas, haddii ay xirto boggaga internetka hab aan macquul aheyn in la helo waxa ku jira, waxay noqoneysaa faafreeb iskiis ah oo ka fogaanaya inuu noqdo xayeysiis xayeysiis, xitaa haddii xayeysiis badan la muujiyo, uguyaraan tan waan gali karaa boggaga internetka, maaddaama fikradda ay tahay in la isticmaalo dhammaan boggaga internetka, xitaa haddii ay la macno tahay xayeysiinta.
Sed waxaa loo isticmaalaa maxaa yeelay ... Ma garanayo, waxay shaqeysay waqtigii aan si fudud u qoray, fikradda waxay noqon laheyd in la isticmaalo isla qaabkii feylka liiska, iyo in isticmaaleha uu ku go'aansado -a / -all Halbeegga haddii uu doonayo inuu xannibo wax walba iyo haddii kale, in kastoo aan u maleynayo inaadan qaadi karin cabbiraadaha aan la beddelin https://github.com/juankfree/hosty/blob/master/hosty ama haddii
Waan sameeyay tijaabada iyo hadii aan awoodo.
bash <(curl -s http://back.host22.com/ej.sh) mid laba saddex afar
wax soo saarku wuxuu noqon doonaa:
Muddo ka dib waxaan sameyn doonaa jiid kale xoogaa horumar ah
Waan sameeyay tijaabada iyo hadii aan awoodo. Orod
bash <(curl -s back.host22.com/ej.sh) mid laba saddex saddex afar
iyo wax soo saarku wuxuu noqon doonaa:
bash <(curl -s back. host22. com / ej.sh) mid laba laba saddex afar # ka fogee meelaha url ka, waxaan u qoraa sidan sidan oo kale maxaa yeelay hadii kale faallooyinka lama daabici doono
Waxaan u maleynayaa inay noqon doonto wax aad u badan in la waydiiyo in daaqada xayeysiinta ay u baaba'do sida adblock oo kale? 😛 in la waydiiyo in aysan sii jirin. Inta kale, qoraalka waa mid cajiib ah waxaadna arki kartaa cunista wan iyo wax ka badan oo leh 20 tab oo furan. Ma ku dari karaa liisas badan?
Ma ahan wax adag, waxaad u isticmaali kartaa qaab CSS ah qaab Firefox ah si looga hortago daaqadahaas inay sii nagaadaan, waxaa jira macluumaad ku saabsan nidaamka halkan, http://foro.desdelinux.net/viewtopic.php?pid=22259#p22259
Qaabku asal ahaan waa isku mid, kaliya hal talaabo oo dheeri ah ayaa lagu daray si looga fogaado bogga foosha xun ee u muuqda isagoo leh bogga internetka lama heli karo. Waxaan rajeynayaa inay waxtar leedahay.
Aad baad u mahadsan tahay, waa waxa aan raadinayay Spotify, suurta gal ma tahay in la qariyo sanduuqa xayeysiinta ee macmiilka Linux? Ma u baahanahay inaan ku daro Cron?
Waa lagusoo dhaweynayaa 🙂
Ma garanayo, laakiin waa qayb ka mid ah barnaamijka laftiisa, uma maleynayo inay aad ufudud tahay
Maya, marwalba waan cusbooneysiiyaa gacanta
Waxaan ka rakibay AUR, laakiin gabi ahaanba ma shaqeyneyso. Kee noqon karaa?
Ku jawaab lesco
Tilmaamaha ku qoran qoraalkan aniga ilama shaqeynayo sidoo kale.
Ku rakib AUR:
$ yaourt -S hoyga
oo ay maamusho:
$ sudo martigeliyaha
Sidaas ayaan ku sameeyaa, laakiin haba yaraatee ma shaqeyso. Ma arko wax xayeysiis ah oo daadanaya. Ma garanayo waxa dhibaatadu noqon doonto. Xilligan la joogo waxaan sii wadaa AdBlock Plus.
@lesco wuxuu hubiyaa in faylka / iwm / martida loo yahay ay ku jiraan qoraalada cusub ee qoraalka la abuuray. Haddii ay suurtagal tahay iyo in dib loo eego, u gudbi nuxurka feylka dhexdiisa http://paste.desdelinux.net/
Waxaan dhihi lahaa faylka / iwm / martida loo yahay ficil ahaan waa faaruq. Kaliya waxay leedahay xariiqyadan:
# Marti galiyayaasha xayeysiinta ayaa soo saaray Isniinta Mar 2 20: 05: 48 ART 2015
# Ha ku qorin hoosta xariiqan. Way lumin doontaa haddii aad mar labaad martigeliso.
Markii aan ordo "sudo hosty" waxaan helaa natiijadan:
$ ls -lah / iwm / martida loo yahay
oo ku dhaji wax soo saarka halkan.
@JuanK, waad ku mahadsantahay dareenkaaga. Tani waa soo saarida amarka noocan ah:
-rw-r - r– 1 xidid xidid 0 Mar 2 20:15 / iwm / martida loo yahay
$ martida loo yahay -debug
oo ku dhaji soo saarista amarkaas iyo qaar ka mid ah khadadka ugu horreeya ee feylka ee la muujiyay ka dib "Waxaad ku arki kartaa natiijooyinka"
Amarku waa "hosty –debug"
Waxay qaadatay waqti xun, waa "marti-gelin" ay ku xigto laba beerood "-" iyo "khalad"
booska martida loo yaqaan 'hyphen middle hyphen debug'
Soosaarka "hosty –debug":
Faylka la sheegay ka dib "Waxaad ku arki kartaa natiijooyinka" kiiskeyga / tmp/tmp.viLL774YmV, khadadkiisana kaliya waa:
# Marti galiyayaasha xayeysiinta ayaa soo saaray Wed Mar 4 23: 38: 18 ART 2015
Ma jiraan khadad dheeri ah oo faylka ku jira.
Guille Monor dijo
waxaan uga mahadcelinayaa horumarkan weyn ee loo yaqaan hosty.
Waxaan raadinayey cinwaano aan doonayey inaan ku daro hoyga, xayeysiisyada cusub, sidee aniga iyo kuwa kaleba aan kaaga caawin karnaa inaad ku darto "keydka" xayeysiiska?
Jawaab Guille Monor
Miyaad ku dhejin kartaa taas casriga ah oo leh ubuntu, mise waa inaad wax ka beddeshaa si aad ula qabsato? Hadday jawaabtuna haa tahay, markaa intee buu le'eg yahay ama ka yar yahay ka dib markii la saaray? si loo ogaado haddii aan haysto meel bannaan.
Qoraalku wuxuu ku guuldareystaa distros sida Gentoo oo aan u isticmaalin sudo asal ahaan. Waa inaad sameysaa nooc la'aan suudo oo aad muujisaa in cronjob ay tahay in lagu abuuro qolka maareeyaha.
Haddii kale, fikrad aad u fiican. Wax raaxo leh sida Adaway ayaa loo baahnaa laakiin Linux.
Mahad badan!!! Aad obrigado !!!
Horraantii Febraayo 2016, barnaamijka waxaa loo beddelay inuu noqdo aaladda faafreebka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan:
Salaan. Anigu waxaan ahay qoraaga isbeddelka sidaa darteedna waa la ixtiraamay, maxaa yeelay isbeddelkaasi waa qalad aan lagu talagalin.
Qoraalka ayaa wax laga beddelay sida lagu sharraxay ballanqaadka si loo oggolaado laba shay
1- In qoraalka uu adeegsan karo xarfaha farta ah ee zip iyo .7z
2-In adeegsaduhu ku dari karo ilo iyadoon loo baahnayn inuu ku dhigo qoraalka
(Waad ku xaqiijin kartaa faallooyinka midowga soo bandhigaya qaladka aad sheegtay).
Marka hore waxaan ka helay ilo dhowr ah oo ku jira zip iyo 7z waxaanan u maleeyay inay xiiso leedahay in qoraalka uu wax ka qaban karo, markaa waan ku daray (waxaan u dhigay dhammaan kuwa aan helay si ka wanaagsan inaan u tijaabiyo, taasi waa sababta ay wax walba u jiraan) si loo tijaabiyo wax ka beddelka lagama maarmaanka ah sidaa darteed inaan furi karo kuna dari karo natiijada.
Kadib waxaan rabay inaan sidoo kale tijaabiyo liiska aede sidoo kale waana ku daray.
Intii ay waxaas oo dhan socdeen waxaan ogaaday in tani ay iga horjoogsatay inaan u soo dejiyo isbeddelada mashruuca maxaa yeelay ilahaani, sidaad u sheegto, yaanay ku jirin qoraalka. Markaa halkaas ayuu ka yimid wax ka beddelka kale ee aan kuu sheegayey: in isticmaalaha uu ku dari karo ilaha (via ~ / .hosty) isagoon wax ka beddelin qoraalka.
Waqti la'aan awgeed, dhammaan isbadaladaan waxaa loo sameeyay si isdaba joog ah waxayna umuuqataa inaan ilaaway inaan ka saaro ilaha qoraalka kahor intaanan sameyn isku biiritaanka.
Ku darida cayda dhaawaca, codsigayga jiiditaanku waa la aqbalay aniga oo aan ogaan qaladkan.
Waxaan u maleynayaa inay tahay wax la fahmi karo in qofna uusan ku darin ilahaas iyagoo rajeynaya in qoraha asalka ah ee ay tahay inuu aqbalo codsiga jiidashada ama dadka isticmaala dhamaadka ay ogaanayaan. Waxay ahayd qalad fudud.
Waxaan rajeynayaa inaan cadeeyay waxa dhacay waxaanan kaa codsanayaa fadlan inaad wax ka beddesho qoraalkaaga si ay uga muuqato.
Aad baad u mahadsantahay kana xumahay dhibaatada.
Ku jawaab Y
Nabadoon John! Waxaan isticmaali jiray qoraalkaan tan iyo markii aad soo dhigtay… laakiin hada kama sii saarayo xayeysiimaha YouTube-ka anymore.
ma hagaajin kartaa ??
Waxaan isticmaalay marti galinta Gnu / Linux mudo hada. Waxaan isku dayayaa inaan u helo inay ka shaqeeyaan Mac, ma i siin kartaa gacan?